China In-Ground GL166 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Eurborn
Isi iyi ọkụ
Banyere Office anyị
Akwụkwọ ikike akwụkwọ
Midsize elu eletrik zuru ezu na ihe jikọrọ CREE XPE (6pcs LED) ngwugwu na 10/40 ogo bean nhọrọ. ingress .Product na-agba jụụ nzukọ niile aka okpomọkụ chọrọ. Inline 350mA nhọrọ ọkwọ ụgbọala gụnyere gbanwere, mains, 1-10V na DALI dimmable solutions。 6W wattage na 600 luminous. Nha ngwaahịa bụ 96x47mm. Ikanam n'èzí ọkụ na-ọtụtụ-eji lawns, èzí ọkụ, na-agafe agafe n'okporo ámá. onye ịghasa oghere imewe iji hụ na nchekwa nke ngwaahịa a ma zere ihe ize ndụ nke izu ohi. Nke a bụ oriọna na-enye ọkụ na-enye ọkụ. Enwere ike ịhọrọ ọdịdị nke oriọna dị ka mkpa imewe. Igwe iko dị elu na-eme ka ngwaahịa ahụ sie ike na ntụgharị ọkụ.
Transportgbọ njem na nkwakọ ngwaahịa
Anyi di iche
Ikanam Light isi Ike dị elu
Ìhè Agba RGB, CWWW, NW, Red, Green, Blue, Amber
Ihe onwunwe OBI 1616
Gbasara Anya S1O Celsius / F40 Celsius
Ịnye ọkụ NA NA
Ibu ibu 94Og
Ntụle IP IP68
Nkwado OWO, IP
Ọnọdụ ikuku dị -2O ° C 2 + 45 Celsius
Nkezi ndụ 5O, OOOHrs
Ngwa (Nhọrọ) Eeh
Ngwa Ime ụlọ / N'èzí / Landscape / Submersible
GL166 GROUND ÌH L
NLERE MERE. Ikanam Brand Agba Doo PowerMode Ntinye Waya USB Ike Egbukepụ Flux Njupụta OghoNnukwu
NJ 166 EGO CW.WW, NW, Red Green, acha anụnụ anụnụ, Amber S10 / F40 Na-aga n'ihu 350mA Usoro 3M 2X0.75mm² USB 6W 600LM NKP926 N85
NJ166D EGO CW, WW, NW, Red Green, Bulu, Amber S10 / F40 Constantvoltage 24VDC Ndekota 3M 2X0.75mm² USB 6.5W 600LM NKP926 N85
GL166RGB EGO 2R + 2G + 2B S10 / F40 Na-aga n'ihu 350mA Usoro 2x3M 4X0.5mm² USB 6W NA NA NKP926 N85
GL166DMX-RGB EGO 2R + 2G + 2B S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController Ndekota 1.1M4X0.5mm² USB 6.5W NA NA NKP926 N85
GL166DMX-RGB Edison RGB (Fullcolor) S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController Ndekota 1.1M4X0.5mm² USB 6.5W NA NA NKP926 N85
GL166DMX-RGBW Edison RGBW (Fullcolor) S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController Ndekota 1-1M4X0.5mm² USB 6.5W NA NA NKP926 N85
DMX decoder e wuru * IES Data.support.
Map Maapụ ọrụ
Nke gara aga: Ntụpọ ọkụ PL021
Osote: N'ime-ala GL150
A ga-akwakọ ngwaahịa niile ma zipu ya naanị mgbe ngwaahịa niile gafere ule nyocha dị iche iche, na nkwakọ ngwaahịa ahụ bụkwa mpempe akwụkwọ kachasị mkpa nke enweghị ike ileghara anya. Dị ka oriọna anaghị agba nchara dịtụ arọ, anyị họọrọ katọn nke corrugated kacha mma na nke kacha sie ike maka nkọwa nke nkwakọ ngwaahịa iji hụ na ngwaahịa ahụ nwere ike chebe nke ọma pụọ ​​na mmetụta ma ọ bụ bumps n'oge njem. Ngwaahịa ọ bụla nke Oubo kwekọrọ na igbe dị iche iche dị iche iche wee họrọ ụdị nkwakọ ngwaahịa kwekọrọ n'ụdị, ọnọdụ na ịdị arọ nke ngwongwo ebugharị iji hụ na ngwaahịa ọ bụla juru eju na-ahapụghị ọdịiche dị n'etiti igbe na ngwaahịa ahụ edozi. igbe. Anyị mgbe nkwakọ bụ aja aja corrugated n'ime igbe na aja aja corrugated elu igbe. Ọ bụrụ na ndị ahịa kwesịrị ịme otu agba agba maka ngwaahịa a, anyị nwekwara ike nweta ya, ọ bụrụhaala na ị na-agwa ndị ahịa anyị tupu oge eruo, anyị ga-eme mgbanwe kwekọrọ na nke mbụ.
Dika onye okacha amara nke oriọna nke oria di elu, Eurborn nwere ulo oru nyocha ya nke oma. Anyị anaghị atụkwasị obi na ndị ọzọ na-apụ apụ n'ihi na anyị nwere usoro nke ọkachamara kachasị elu na nke zuru oke, a na-enyocha ma na-echekwa akụrụngwa niile. Gbaa mbọ hụ na akụrụngwa niile nwere ike ịrụ ọrụ ọfụma ma mee nhazi oge na njikwa nke ule metụtara ngwaahịa na nke mbụ.
Workshoplọ ọrụ Eurborn nwere ọtụtụ igwe ọrụ ọkachamara na ngwaọrụ nnwale dịka igwe ọkụ ọkụ, igwe na-ere ọkụ ọkụ, ụlọ nnwale UV ultraviolet, igwe nyocha laser, ime ụlọ nyocha oge okpomọkụ na iru mmiri, igwe nyocha nnwale nnu, usoro nyocha ngwa ngwa ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ na-ekesa ọkụ. ule usoro (IES ule), UV gwọọ oven na electronic mgbe nile okpomọkụ ihicha oven, wdg Anyị nwere ike nweta a mbara àgwà akara usoro maka bụla ngwaahịa anyị na-emepụta.
Ngwaahịa ọ bụla ga-anwale 100% elektrọnik elekere elektrọnik, 100% ule merela agadi na ule 100% nyocha mmiri. Dịka ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ngwaahịa si dị, gburugburu ebe ngwaahịa ahụ chere ihu dị ọtụtụ narị ugboro karịa ọkụ ọkụ ụlọ maka oriọna na-enweghị igwe anaghị agba nchara na nke ala. Anyị maara nke ọma na oriọna nwere ike ọ gaghị ahụ nsogbu ọ bụla na obere oge na gburugburu mpaghara. Maka ngwaahịa nke Eurborn, anyị tụkwasara anya banyere ijide n'aka na oriọna ahụ nwere ike nweta arụmọrụ na-arụ ọrụ ogologo oge n'ọtụtụ ọnọdụ dị egwu. Na gburugburu ebe obibi, nyocha nke gburugburu anyị dị ọtụtụ ugboro. Ọnọdụ a siri ike nwere ike igosi ogo ọkụ ọkụ iji hụ na ọ nweghị ngwaahịa nkwarụ. Naanị mgbe ị nyochasịrị site n'ígwé ga-esi Ober nyefee anyị ngwaahịa kachasị mma n'aka ndị ahịa.
Eurborn nwere asambodo ruru eru dika IP, CE, ROHS, patent ọdịdị na ISO, wdg.
Akwụkwọ IP: Ltù Na-ahụ Maka Nchedo Mba Nile (IP) na-ekewa oriọna dị ka sistemụ nzuzo ha nke IP maka uzuzu, ihe mba ọzọ siri ike na ntinye mmiri. Iji maa atụ, Eurborn na-arụpụta ngwaahịa ndị dị n'èzí dịka ọkụ & ọkụ ala, ọkụ ala n'okpuru. All n'èzí anaghị agba nchara ọkụ izute IP68, na ha nwere ike iji mee ihe n'ime mmiri ma ọ bụ n'okpuru osimiri ojiji. Akwụkwọ EU CE: Ngwaahịa agaghị eyi egwu mkpa nchekwa nke mmadụ, anụmanụ na nchekwa ngwaahịa. Ngwaahịa anyị ọ bụla nwere asambodo CE. Akwụkwọ ROHS: Ọ bụ ụkpụrụ dị mkpa nke iwu EU guzobere. Aha ya zuru oke bụ "Ntụziaka na igbochi iji ụfọdụ ihe egwu dị na ngwa eletriki na eletrọniki". A na-ejikarị ya emezi ihe na usoro ụkpụrụ nke ngwaahịa eletriki na eletriki. Ọ na-enye aka na ahụ ike mmadụ na nchekwa gburugburu ebe obibi. Ebumnuche nke ọkọlọtọ a bụ iwepu ndu, mercury, cadmium, chromium hexavalent, biphenyls polybrominated na polybrominated diphenyl ethers na ngwaahịa eletriki na eletrọniki. Iji chebe ikike na ọdịmma nke ngwaahịa anyị, anyị nwere asambodo patent nke anyị maka ọtụtụ ngwaahịa. Akwụkwọ ISO: Usoro ISO 9000 bụ ọkọlọtọ ama ama n'etiti ọtụtụ ụkpụrụ mba ụwa nke ISO (International Organization for Standardization) guzobere. Ọkọlọtọ a abụghị inyocha ogo ngwaahịa a, mana ịtụle njikwa njikwa ngwaahịa na usoro mmepụta. Ọ bụ ụkpụrụ njikwa nhazi.
1.Otu oriọna nke ngwaahịa a bụ nke SNS316L igwe anaghị agba nchara. 316 igwe anaghị agba nchara nwere Mo, nke dị mma na corrosion eguzogide karịa 304 igwe anaghị agba nchara na elu okpomọkụ gburugburu. 316 na-ebelata ọdịnaya nke Cr ma na-abawanye ọdịnaya nke Ni ma na-abawanye Mo2% ~ 3%. Ya mere, ikike mgbochi corrosion siri ike karịa 304, nke kwesịrị ekwesị maka iji ya mee ihe na mmiri ọgwụ, mmiri mmiri na gburugburu ndị ọzọ.
Ihe ntanetị ọkụ 2. Ikanam ọkụ na-anabata akara CREE. CREE bụ onye na-emepụta ihe ọkụ ọkụ na ndị na-emepụta ọkụ ọkụ na ahịa. Uru nke mgbawa na-abịa site na silicon carbide (SiC), nke nwere ike iji ike karịa na obere oghere, ebe ị na-atụnyere teknụzụ ndị ọzọ dị, ihe na ngwaahịa na-eweta obere okpomọkụ. CREE LED na-ejikọta ihe InGaN nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na nke G · SIC® nke ụlọ ọrụ na-arụ n'ime otu, nke mere na ndị LED dị elu na arụmọrụ dị elu na-enweta arụmọrụ kacha mma.
3. The iko adopts n'obi iko + akụkụ nke silk ihuenyo, na iko ọkpụrụkpụ bụ 3-12mm.
4. companylọ ọrụ ahụ ahọrọwo mgbe niile na-arụ ọrụ nke ọma na aluminom na ihe dị elu karịa 2.0WM / K. A na-eji mkpụrụ osisi Aluminom eme ihe dị ka ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ maka ọkụ, nke nwere njikọ chiri anya na ndụ ọrụ nke LEDs. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ dị elu nke aluminom nwere ezigbo nduzi na ikike ikpo ọkụ, ọ dịkwa mma maka ngwaahịa ndị chọrọ ikike ikpo ọkụ ọkụ dị ukwuu, karịsịa ndị ọkụ ọkụ dị elu.
Na-N'ala N'èzí Lighting
Ozi dị mkpa: Anyị ga-ebute ozi ndị gụnyere "aha ụlọ ọrụ" ụzọ. Biko gbaa mbọ hapụ ozi a na "ajụjụ gị". Daalụ!
Officelọ ahịa: Room 702, Zhe Jiang Commerce Building, Nke 430 Dongguan Avenue, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China
Officelọ ọrụ ire ahịa
Faksị: 86 769 2302 2799
Faksị: +86 769 8523 2835
Email anyị: info@eurborn.com